Maxamed Xaaji Cigaal: Dib u milicsashada nolosha aabbihii dhidibada u aasay Somaliland. |
Maxamed Xaaji Cigaal: Dib u milicsashada nolosha aabbihii dhidibada u aasay Somaliland.
Maxamed Ibraahim Cigaal oo mar soo noqday R/Wasaaraaha Soomaaliya ayaa sawirkan ku galay magaalada New York sanaddii 1968
Arrintaas hoggaamiyeyaashii Soomaalidu dhib ayey kala kulmeen, waxana ay ka faquuqmeen dalalkii deriska ee Itoobiya iyo Kenya iyada oo Jamhuuriyaddii Soomaaliya go’doon siyaasadeed dunida ka gashay. Arrintaas waxa u sabab ahaa bisayl la’aanta siyaasiyiinta Soomaalida iyo iyaga oo aan dib ugu noqon taariikhdii gumaysi ee Soomaalidu soo martay iyo aragtidii gumeystayaasha.
Dhallinyaro u dabbaaldegyso sanadguurada markii ay Somaliland ku dhawaaqday madaxbanaannida
Kolkii dalka lagu kala yaacay waxa uu qayb ka noqday shirarkii dib u heshiisiinta gaar ahaan kuwii Jabuuti ka dhacay 1991 oo uu isagu shir guddoominayey.
Dhowr jeer ayay doorashooyin ka dhaceen Somaliland tan iyo markii ay ku dhawaaqday madaxbanaannida